EPRP ရေဒီယို (ကရင်) Archives - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
You are at:Home»မာတီမီဒီယာ»EPRP ရေဒီယို»Category: "EPRP ရေဒီယို (ကရင်)"
Browsing: EPRP ရေဒီယို (ကရင်)
ကရင်ဘာသာဖြင့်ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ။ ။ EPRP ကရင်ရေဒီယိုအဖွဲ့မှထုတ်လုပ်တင်ဆက်သော သတင်းများ၊တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း၊ပြဇာတ်များ၊တိုင်းရင်းသားဒေသခံများအကြောင်း၊တိုင်းရင်းသားဒေသများ
ဖေဖ၀ါရီလရဲ့ တတိယအပါတ် ၁၆.၀၂.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့တိုင်းရင်းသား ၁၀ ဖွဲ့ နယ်စပ်မှာတွေ့ဆုံမည့်သတင်း သတင်း (၂) – မူတရော်(ဖာပွန်)ခရိုင် ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး ခေါင်းဆောင်သစ်များရွေးကောက် တင်မြှောက်တဲ့သတင်း သတင်း(၃) – ပြည်သူ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် NCA မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကို လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – ပညာရေးမှာထူးချွန်ထက်မြတ်မှု့ကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပညာသင်ယူနေပြီး (Schlarship) ရရှိတဲ့ နော်ဂျက်ဂလင်းညွန့် က ပညာရေးနဲ့ပက်သက်ပြောပြချက်တွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။…(voice) ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စောသောဒိုထူး က ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၅)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့ ဒုတိယအပါတ် ၉.၂.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – KNU/KNLA-PC မှ ၎င်းတို့နယ်မြေအတွင်းရှိ ပညာရေး ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်ရေး PEF ဖောင်ဒေးရှင်းထူထောင်တဲ့သတင်း သတင်း (၂) – ကရင်(၃) ပါတီပူးပေါင်းပြီး ပါတီသစ်တည်ထောင်မည့်သတင်း သတင်း(၃) – NLD အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ခရီးမပေါက်သေးဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွက်ဆစ်ပြောတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ အတတ် ပညာပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှု့ လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာဖြိုးဝေဇက် ကမြိုင်ကြီးငူ စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲ၊ စားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှု့ အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်ခလားရာက ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ၏ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၄)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဖေဖ၀ါရီလရဲ့ ပထမအပါတ် ၀၂.၀၂.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ရှင်းပြဖို့ KNU နဲ့ KCBOs/KSCOs တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်တဲ့သတင်း သတင်း (၂) – JMC အကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေး ကေအဲန်ယူ ပြုလုပ်သွားမည့်သတင်း သတင်း(၃) – စစ်ရေးနည်းလမ်းမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရန် ကချင်ပါတီများ တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- ကရင်ပြည်နယ် ပျားမွေးမြူရေးဋ္ဌာနမှ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးဖြစ်တဲ့ ဆရာစောကျော်ကျော်လင်း က ပျားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့ ရရှိလာတဲ့ ပျားရည်တွေရဲ့ ကောင်းကျိုးနဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက် – စောသောဒိုထူး နဲ့ နော်မူးရာ တို့က စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ တွေ့ကြုံရတာ တွေနဲ့ပက်သက်လို့ဆွေးနွေး တဲ့အကြောင်း တွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပြယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၃)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဇန်န၀ါရီလ နောက်ဆုံးအပါတ် ၂၆.၀၁.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – KNU နယ်မြေရှိ ကရင်စာသင်ကျောင်းများအတွက် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုအရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့သတင်း သတင်း (၂) – မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့်လားဟူဒီမိုကရက်တစ် အစည်းအရုံး (LDU) တို့အပစ်ရပ်လက်မှတ် ရေးထိုးမည့်သတင်း သတင်း(၃) – NCA လက်မှတ်ထိုးရန် အဆိုပြုထားတဲ့ ၈ချက်ဆက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ UNFC ကြေညာတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- ဆရာစောအယ်ဒိုက အခုလက်ရှိ ကရင်ပြည်ရဲ့လက်ရှိတိုးတက်မှု့တွေ၊ စီးပွါးရေးတိုးတက်လာမှု့အခြေအနေ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ လူငယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် သင့်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြောပြ တာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စောသောဒိုထူး က ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၂) ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဇန်န၀ါရီလ တတိယအပါတ် ၁၉.၀၁.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – သံသယစိတ်များကြောင့် NCA အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ထင်သလောက်မလွယ်ဟု ဗိုလ်ချုပ်စော အိုင်းဇက်ဖိုး ပြောတဲ့သတင်း သတင်း (၂)- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ကက်သလစ်ဂိုဏ်းအုပ် ဆရာတော်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – ၂၁ရာစုပင်လုံဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ရေး အလေးအနက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ PNLO ထုတ်ပြန် တဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – သောတရှင်တွေနားဆင်ရမှာကတော့- (NAG) (Network Adipati Group) ရဲ့ သင်တန်းပေးနေတဲ့ဆရာတာခဲ(Field Facilitator) က အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ သင်တန်းများပေးနေုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်ခလားရာက ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” ဆေးရောင်ပျယ်ပန်းချီကား” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၁)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဇန်န၀ါရီလ ဒုတိယအပါတ် ၁၂.၀၁.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ကရင်ပြည် မဲသဝေါဒေသ တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်း ။ သတင်း (၂)- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြန်ရွေးမည့်ကိစ္စ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ KNU ပြောဆိုမှုအပေါ် နယ်လုံဝန်ကြီး ကန့်ကွက်တဲ့သတင်း ။ သတင်း(၃) – အစိုးရနဲ့ နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကို ဖြေရှင်းဖို့ အပစ်ရပ် ၈ ဖွဲ့မှ PPST အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်တဲ့သတင်း ။ သတင်း(၄) – ၂၁ ရာစုပင်လုံ(တတိယအစည်းအဝေး) အကြိုလူထုဆွေးနွေးပွဲ မကွေးတွင် ပြုလုပ်တဲ့သတင်း ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်မူးရာက ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေးမြန်းချက် – နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ပံ့ပိုးကူညီသူ နန်းသိုက်သိုက်သင်းကျော်က သူမရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု့လုပ်ငန်းအကြောင်း နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားစဉ်ရမှဖြစ်ပါတယ်။(မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါတယ်.) ဆွေးနွေးချက် – နော်မူးရာ နဲ့ စောသောဒိုထူး တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ဆွေးနွေး ချက်တွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၄)
ဒီဇငျဘာ 22, 2017 EPRP
4 ဒီဇင်ဘာလ စတုတ္ထအပါတ် ၂၂.၁၂.၂၀၁၇ တွင် ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တရုတ် အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ တတိယပင်လုံ ကျင်းပရေးဆွေးနွေးတဲ့သတင်း သတင်း (၂) – သထုံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးကို ၆ လအတွင်း ဖွဲ့စည်းသွားမည့်သတင်း သတင်း(၃) – ပင်လုံဖိတ်ကြားလျှင် မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့များ မဟာမိတ်အစုအနေနဲ့ တက်မည့်သတင်း မေးမြန်းချက် (၁) – ၂၀၁၀ ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လဲဖြစ်၊ (JMC) အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လဲဖြစ်တဲ့ ဒေါ်နန်းစေးဟွာ က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခြေအနေတွေအကြောင်းနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ တည်ဆောက်မည့်ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ အကြောင်းစတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါတယ်.) ကောက်နုတ်ချက် – မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စောသောဒိုထူး က ထုတ်နုတ် တင်ပြသွားမှာပါ။ မေးမြန်းချက် (၂) – ထန်းတစ်ပင်မြို့နယ် ကရင်စာပေသင်ကြားရေး ကော်မတီသဘာပတိဖြစ်တဲ့ ဆရာမင်းအောင်မှ ကရင်စာပေ သင်ကြားမှု့အကြောင်း နဲ့ ကရင်စာပေနဲ့ ပက်သက်ပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ ကရင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ဒီဇင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ် (၂၉.၁၂.၂၀၁၇)မှစတင်ပြီးတော့ ဇန်န၀ါရီလ ပထမအပါတ် အထိ မထုတ်လွင့်နိုင်သောကြောင့် ရှေးဦးစွာ မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ ကရင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ ဇန်န၀ါရီလရဲ့ ဒုတိယအပါတ် (၁၂.၀၁.၂၀၁၈)တွင် ပြန်လည်ထုတ်လွင့်မှာ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ။ LISTEN on…
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၃)
ဒီဇင်ဘာလ တတိယအပါတ် ၁၅.၁၂.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေး ဇန်နဝါရီ ၂၉ တွင် စတင်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့သတင်း သတင်း (၂)- ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာ JMC-S နဲ့ဒေသခံလူထု တို့တွေ့ဆုံတဲ့ သတင်း သတင်း(၃) – တနိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဆန်၊ဆီ ပြတ်လပ်၊ စပါးရိတ်ခွင့်မရ တဲ့သတင်း မေးမြန်းချက်(၁)- ဖလုံ-စဂေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်မြင့် က ဖလုံ-စဂေါ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအဖွဲ့အစည်း ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်း နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြတာတွေကို နားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါတယ်.) ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်မူးရာက ကောက်နုတ်တင်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက် – နော်ခလားရာ နဲ့ စောသောဒိုထူး တို့က ကရင်ပြည်နယ်တွင်း တည်ဆောက်မဲ့ ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအကြောင်း တွေနဲ့ပက်သက်လို့ဆွေးနွေး ချက်တွေကို နားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
ဒီဇင်ဘာလ ဒုတိယအပါတ် ၀၈.၁၂.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ပြည်နယ်အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်မှ အခြေခံမှု(၈၅)ချက်ပါ စာတမ်းနှစ်စောင်ထွက်ပေါ်တဲ့သတင်း သတင်း (၂)- NCA လက်မှတ်ထိုးရှစ်ဖွဲ့နဲ့ UNFC ဒီဇင်ဘာလလယ်မှာတွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်နေတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – လူထုထိခိုက်နစ်နာစေမည့်လုပ်ရပ်များ ရှောင်ရှားရန် တပ်မတော်နဲ့ SSPP ကို SNLD အမတ် တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက်(၁)- Action Aid မှာဖွံဖြိုးရေးလူငယ်အစီအစဉ်နဲ့ လူငယ်စွမ်းဆောင်မြင့်တင်ပေးပြီး (Global Platform) ရဲ့ မန်နေဂျာဆရာစောလင်းထက်က (Action Aid)ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းတွေ၊ (NCA)နဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ အကြောင်း ပြောပြတာတွေ ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။(မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါတယ်.) ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်ခလားရာ ကထုတ်နုတ် တင် ပြသွားမှာပါ။ မေးမြန်းချက်(၂)- မဟာမာဃလူမှု့ကူညီရေးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရင်မြင့်က ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဘောလယ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ မဟာမာဃလူမှု့ကူညီရေးအသင်း အကြောင်း ပြောကြားချက်တွေကို ကိုနားဆင်ရမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။(မှတ်ချက်။။မြန်မာလိုပြောပါတယ်) LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၁)
ဒီဇငျဘာ 2, 2017 EPRP
ဒီဇင်ဘာလ ပထမအပါတ် ၀၁.၁၂.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – တပ်ချုပ်နှင့် KNU ဥက္ကဋ္ဌ တို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အားလုံးပါဝင်သော ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်း သတင်း (၂)- အီတူးထာ့ IDP ဒုက္ခသည်များရဲ့ ရေရှည်ရပ်တည်နိုင်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲချမှတ်နေတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေး ဥပဒေကြောင်းအရ အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ကရင်ရှေ့နေများ ကြိုးပမ်းတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့တွင် နေထိုင်တဲ့ ကရင်ရေးရာကော်မတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်တဲ့ ဆရာကျော်စွာကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပက်သက်ပြီးကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးတွေ အကြောင်း၊ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပက်သက်ပြီး ဆက်နွယ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကြောင်းပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။(မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါတယ်.) ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စောသောဒိုထူး ကထုတ်နုတ် တင်ပြသွားမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ၏ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” မြေဇာပင်တုိ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၅) ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၅၀)
နိုဝင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်၂၄.၁၁.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁)–မူဘောင်ပြင်ဆင်ချက်များ UPDJC တင်ရန် အတွင်းရေးမှူးများ စည်းဝေးနေတဲ့သတင်း သတင်း(၂)–ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် နောက်ပြန်လှည့်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်ကြောင်း KPP ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်း သတင်း(၃)-NCA ကိုဒေသခံလူထုထောက်ခံမှ အောင်မြင်မယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက်-ကရင်ပြည်နယ်အများပိုင်ကုမ္မဏီရဲ့(KST) ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ဆရာကြီးဦးဆွိက ကရင်ပြည်နယ် ရဲ့တိုးတက်လာမှု့တွေ၊ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပက်သက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြတာတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါတယ်. ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်မူးရာက ထုတ်နုတ်တင် ပြသွားမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ-EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” မြေဇာပင်တုိ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၄)ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
နိုဝင်ဘာလ တတိယအပါတ် ၁၇.၁၁.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – နယ်စပ်ဒုက္ခသည်များရဲ့ အခြေအနေကို အလှူရှင်သုံးနိုင်ငံ သံရုံးတာဝန်ရှိသူများ လာရောက် လေ့လာတဲ့သတင်း သတင်း (၂) – UWSA ၀တပ်ဖွဲ့ကို NCA လက်မှတ်ထိုးရန် အစိုးရတိုက်တွန်းတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – ပလက်ဝတိုက်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေတိုးလာတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက်- ကျောက်မီးအလုပ်ရုံတည်ဆောက်ဖို့ တာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုး ဆာဗူးရောအိုဗားရက ကရင်ပြည်နယ်မှာကျောက်မီးသွေးအလုပ်ရုံ တည်ဆောက်မှုနှင့် ပက်သက်တဲ့အကြာင်း ပြောပြတာတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီးနော်မူးရာကထုတ်နုတ် တင်ပြသွားမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” မြေဇာပင်တုိ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၃) ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၈)
နိုဝငျဘာ 1, 2017 EPRP
နိုဝင်ဘာလ ပထမအပါတ် ၁.၁၁.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍအထူးဦးစားပေး ဆွေးနွေးဖို့ UPDJCဆုံးဖြတ်တဲ့သတင်း သတင်း (၂) – တိုင်းရင်းသားများပါဝင်တဲ့ (၃၁)ကြိမ်မြောက် KNLA ဗဟိုဆေးဌာနရဲ့ ဆေးသင်တန်း သင်တန်းသူ/သား ၄၃ဦး အောင်မြင်တဲ့သတင်း သတင်း(၃) – ပြည်တွင်းစစ်ချုပ်ငြိမ်းရေး နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်အပေါ် မူတည်နေတဲ့သတင်း သတင်း(၄) – ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပါဝင်လာချင်တဲ့ အဖွဲ့တွေကို အချိန်မရွေး ကြိုဆိုတယ်လို့ နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပြောတဲ့သတင်း ဆွေးနွေးချက် – စောသောဒိုထူးနဲ့နော်မူးရာ တို့က ကရင်ပြည်နယ်တွင်း တည်ဆောက်မည့် ကျောက်မီးသွေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအကြောင်း တွေနဲ့ပက်သက်လို့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မေးမြန်းချက် – ရေဘော်သောင်တွင် နေထိုင်သူ..မမီးမီက..ကရင်ပြည်နယ်မှာကျောက်မီးသွေးအလုပ်ရုံ တည်ဆောက်တဲ့ အပေါ်ကန့်ကွက်တဲ့အကြာင်းပြောပြတာတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” မြေဇာပင်တုိ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၂) ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ ကရင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယအပါတ် (၁၀.၁၁.၂၀၁၇) တွင်မထုတ်လွင့်နိုင်သောကြောင့်ရှေးဦးစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။ကရင်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလရဲ့ တတိယအပါတ် (၁၇.၁၁.၂၀၁၇)တွင် ပြန်လည်ထုတ်လွင့်မှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၇)
အောကျတိုဘာ 27, 2017 EPRP
အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်၂၇.၁၀.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – NCA လက်မှတ်ထိုးရေး ညှိနှိုင်းရန် အချက်အချို့ ကျန်ရှိသဖြင့် အစိုးရနဲ့ UNFC နိုဝင်ဘာတွင် ထပ်မံတွေ့ဆုံမည့်သတင်း သတင်း(၂) – ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သည့်ကာလ လုံခြုံရေးကဏ္ဍရဲ့အရေးပါမှု ဘားအံတွင်ဆွေးနွေးတဲ့ သတင်း(၃) – ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ်ရှိ သဘာဝတောင် (၄)ခုကို ကာကွယ်ရန် ကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့ထဲမှထန်းတပင်မြို့နယ်တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထန်းတပင်မြို့နယ်၊တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့၏ ဒုအတွင်းရေးမှူးစောဂျိုးဇက်ကပြောပြတာတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက် – နော်မူရာနဲ့နော်ခလားရာ တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းဆွေးနွေးချက်တွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” မြေဇာပင်တုိ့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်း” ဇာတ်လမ်းရဲ့ အပိုင်း(၁)ကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၆)
အောကျတိုဘာ 20, 2017 EPRP
အောက်တိုဘာလ တတိယအပါတ်၂၀.၁၀.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ကရင်နီ ဒုက္ခသည်စခန်းက ဆယ်တန်းလွန်ကျောင်း တချို့ ထောက်ပံ့ကြေး ရပ်တန့် သွားတဲ့သတင်း သတင်း(၂) – NCA စာချုပ် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များအား ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (RCSS/SSA) မှ ပြည်သူကို ရှင်းလင်းတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – KWO သထုံခရိုင် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များအား အသစ်ထပ်မံရွေးကောက်တဲ့ သတင်း ကောက်နုတ်ချက် – မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်ခလားရာက ထုတ်နုတ်တင်ပြသွားမှာပါ။ ဆွေးနွေးချက် – နော်မူရာနဲ့စောသောဒိုထူး တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းဆွေးနွေးချက် တွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” အစ်ကိုကြီးအိမ်ပြန်လာမှာပါ” ဇာတ်လမ်းရဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၅)
အောကျတိုဘာ 14, 2017 EPRP
အောက်တိုဘာလ ဒုတိယအပါတ်၁၃.၁၀.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – NCA ၂ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပမဲ့သတင်း သတင်း(၂) – ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ချည်းကပ်မှုများနဲ့ လုပ်ဆောင်မယ်လို့ KNU ပြောတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – UNFC အဖွဲ့ အပစ်ရပ်လက်မှတ် (NCA) ရေးထိုးခြင်း ၂ နှစ်ပြည့်ပွဲတတ်ရန် တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးတဲ့ သတင်း သတင်း(၄)-အနာဂါတ်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသားပညာရေးကဏ္ဍအတွက် ကရင်စာ၊ယဉ်အဖွဲ့များ တတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်း မေးမြန်းချက်- KPP ကရင်ပြည်သူ့ပါတီရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းကို KPP ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နော်ငြိမ်းငြိမ်းမော်ရဲ့ ပြောပြတာတွေကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး စောသောဒိုထူး ကထုတ်နုတ် တင် ပြသွားမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” အစ်ကိုကြီးအိမ်ပြန်လာမှာပါ” ဇာတ်လမ်းအပိုင်း(၆) ကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၄)
အောကျတိုဘာ 6, 2017 EPRP
အောက်တိုဘာလ ပထမအပါတ် ၆.၁၀.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ဒေသအသီးသီးမှ ကရင်လူငယ်များ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးသင်တန်းကို ကေအဲန်ယူ မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့သတင်း သတင်း(၂) – UNFC အနေနဲ့ NCA အတိုင်းလိုက်ရင် ရှေ့မတိုးနိုင်ပဲ ဖြစ်မယ့်သတင်း သတင်း(၃) – သြစတြေးလျားနိုင်ငံတွင် အီတူးထာ့ပြည်တွင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ရံပုံငွေရှာ ဈေးရောင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – ကရင်လူငယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင်တန်းပေးတဲ့ ဆရာမနော်အယ့်ဖောရဲ့ကရင်လူငယ်တွေကို သင်တန်းပေးတဲ့အကြောင်းပြောပြတာတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက် – စောသောဒိုထူးနဲ့နော်ဇင်မေဦး တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းဆွေးနွေးချက် တွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” အစ်ကိုကြီးအိမ်ပြန်လာမှာပါ” ဇာတ်လမ်းအပိုင်း(၅)ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၃)
စကျတငျဘာ 29, 2017 EPRP
စက်တင်ဘာလ နောက်ဆုံးအပါတ်၂၉.၉.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ပထမဆုံးအကြိမ် မွန်ပြည်နယ် ကရင်လူငယ် စွမ်းရည်တည်ဆောက်မှုသင်တန်း ပြုလုပ်ပြီးစီးတဲ့သတင်း သတင်း(၂) – စစ်ပွဲများကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ အဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ NLD ပါတီအစိုးရ ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – မြန်မာ့အရေးတွင် ပါဝင်သူများအားလုံး တူညီသော ဘုံရပ်တည်ချက် ရရှိရန် UNFC ဦးဆောင်သော ဆွေးနွေးပွဲစတင်တဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – စာဖတ်ခြင်းကတိုင်းပြည်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သလို၊တိုင်းပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွေးအခေါ် ကောင်းတွေလဲထုတ်ပေးတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း (Theophilus) စာကြည့်တိုက်မှ တာဝန်ခံ ဆရာမဘီအက်စတယ်လ်ရဲ့ ပြောပြတာတွေကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက် – စောသောဒိုထူးနဲ့နော်ခလားရာတို့က ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းဆွေးနွေးချက် တွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRP ရဲ့ ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” အစ်ကိုကြီး အိမ်ပြန်လာမှာပါ” ဇာတ်လမ်းအပိုင်း(၄)ကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၄၂)
စကျတငျဘာ 22, 2017 EPRP
စက်တင်ဘာလ စတုတ္ထအပါတ် ၂၂.၉.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁) – ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC) အဆင့်ဆင့်တွင် ပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ကိုယ်စားလှယ်များ ဆွေးနွေးပွဲ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပတဲ့သတင်း သတင်း(၂) – ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အမျိုးသမီးများဖိုရမ် ဘားအံမြို့တွင် ကျင်းပတဲ့သတင်း သတင်း(၃) – ၂၂နှစ်အကြာ မှေးမှိန်ခဲ့တဲ့ ဒုံရင်းမြို့နယ် KYOကို အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – စစ်ဘေးရှောင်ခလေးတွေကို ပြုစုရှောက်ပေးနေတဲ့ (Sun Shine) ဘော်ဒါဆောင်မှ တာဝန်ခံဆရာမ တစ်ဦးရဲ့ ပြောပြချက်တွေကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် (SunShine) ဘော်ဒါဆောင်မှာ နေထိုင်တဲ့ကလေးငယ်တစ်ဦးရဲ့ပြောကြားတာတွေကိုနားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး နော်မူးရာ ကထုတ်နုတ် တင် ပြသွားမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ – EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” အစ်ကိုကြီးအိမ်ပြန်လာမှာပါ” ဇာတ်လမ်းအပိုင်း(၃) ကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )
စကျတငျဘာ 15, 2017 EPRP
စက်တင်ဘာလ တတိယအပါတ် ၁၅.၉.၂၀၁၇ တွင်ထုတ်လွင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် သတင်း(၁)-ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အပေါ် ရပ်တည်မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ ကေအဲန်ယူအား နိုင်ငံတကာကရင်အဖွဲ့ တိုက်တွန်းတဲ့သတင်း သတင်း(၂)–အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ စိန့်ပေါလ်မြို့၌ ကရင်စာပေသင်တန်းဆင်းပွဲ ပြုလုပ်ပြီးစီးတဲ့သတင်း သတင်း(၃)–KNU မှ ဝင်းရေးမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ထောက်ပံ့မှုတိုးပေးရန် လိုလားတဲ့သတင်း သတင်း(၄)- မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ TNLA တနေ့တည်း တိုက်ပွဲ ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက်- ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး (KYO) အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်စောဖိုးချစ်က ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များ အကြောင်းပြောပြတာတွေကို နားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကောက်နုတ်ချက်- မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ ရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး နော်မူးရာ ကထုတ်နုတ် တင်ပြသွားမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းတွဲ- EPRPရဲ့ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ…” အစ်ကိုကြီးအိမ်ပြန်လာမှာပါ” ဇာတ်လမ်းအပိုင်း(၂)ကိုနားစဉ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ LISTEN on Soundcloud DOWNLOAD (click right & select “ Save link as” )